Maitiro ekutamba echinyakare macompso paApple TV 4 | IPhone nhau
Maitiro ekutamba echinyakare consoles paApple TV 4 (uye iPhone)
Chizvarwa chechina Apple TV ine akati wandei akakosha maficha, asi ini ndinofunga isu tese tinobvumirana kuti kukwezva kwayo kukuru ndekwekuti ine yayo App Store. Parizvino hapana mashandisirwo akawanda senge muIOS, kana padyo padyo, asi ingori nyaya yenguva yekuti isu tinogona kuita chero chinhu neApple TV yedu 4. Uye kutaura nezvekuita chero chinhu, pane imwe yatinokwanisa ita izvozvo zvinoita kuti tifungidzire kune avo vedu vanotamba pa classic consoles senge Master System II uye Mega Dhiraivha kubva SEGA kana iyo Nintendo uye Super Nintendo kubva kuNintendo (Doh!), Uye isu tinokwanisa kutamba mazita ezvinonyaradza izvi nekutenda kuna James Addyman, musimudziri akagadzira Provenance, emulator yakawanda-console.
Kuti tiise iyo, isu tinotora mukana wekuti Apple haichabvunze account yakabhadharwa yekuvandudza kuti ikwanise kuyedza izvo zvinoshandiswa. Nenzira iyi, isu tinongofanirwa kutora kodhi kodhi yeemulator uye chirase kuApple TV (kana iPhone nePadad) neXcode. Icho chiitiko chekuti, kunyangwe chiri chokwadi kuti tinogona kukanganisa, zviri nyore chaizvo kana tatozviita kamwe chete. Isu tinodonongodza maitiro ari pazasi.
1 Maitiro ekutamba echinyakare macompso paApple TV
1.1 Chii chatinoda:
1.2 Maitiro ekuisa Provenance
1.3 Maitiro ekuisa maROM kuProvenance
2 Iyo system inoshanda pane iyo iPhone
Maitiro ekutamba echinyakare macompso paApple TV
Iyo sosi kodhi yekushandisa
Apple Developer Akaundi (Yemahara)
Maitiro ekuisa Provenance
Isu tinonyoresa sevanogadzira pa IZVI ZVINONZI.
Isu tinobatanidza Apple TV kuMac netambo ye USB-C uye kune chiteshi chemagetsi chine tambo inoenderana.
Isu tinoenda kune iyo peji uko iko kodhi yekushandisa inobatwa uye kuteedzera iyo URL. Mune ino kesi, iyo Provenance webhusaiti iri paGitHub, kubva kwatichazoteedzera iyo Clone URL.
Isu tinovhura Xcode toenda ku Kunobva Kudzora / Tarisa Kunze.
Isu tinonamira iyo URL iyo yataikopa mupendi iyo yatinoona muhwindo inotivhurira.
Kana paine anopfuura faira rimwe kana rapedza kurodha pasi, tinosarudza tenzi. Ipapo tinobaya pamusoro Next.
Iwindo idzva rinozovhurika rwoga. Muhwindo rino, isu tinofanirwa kusarudza (mune ino kesi) Provenance uyezve ProvenanceTV-kuburitswa.
Isu tinosarudza yedu Apple TV uye tinya pane iyo Triangle bhatani (seKutamba). Izvi zvichatanga kunyora iko kunyorera.
Pachave netsikidzi, asi tichazvigadzirisa kusarudza yedu Apple ID y kutumidza zvakare iyo faira (sezvaungaona muvhidhiyo) muchikamu chikuru chekushandisa. Ipapo isu tinorova kutamba zvakare, ichapedza kuumbiridza uye nekuisa iko kunyorera. Iwe unofanirwa kumirira kuti uone meseji ye «Vaka kubudirira ».
Maitiro ekuisa maROM kuProvenance
Iye zvino isu tinongofanirwa kuisa maROM kuProvenance. Kune izvi tichaita zvinotevera:
Isu tinovhura Provenance pane yedu Apple TV.
Tinosarudza Tumira maROM. Izvi zvichatiratidza URL.
Isu tinonyora iyo URL iyo iyo yapfuura nhanho yatakatipa muiyo browser kubva pakombuta yedu.
Tinosarudza dhairekodhi «ROMs"(Zvakakosha, kuti muvhidhiyo haina kunaka) tobva tasarudza Isa maROM.
Isu tinodzokera kuApple TV, isu tinopfiga hwindo uko kwatinoona iyo URL yatinoisa mubrowser uye tichaona mitambo yese yatakaisa nemabutiro avo nezvose.
Uye ndizvozvo. Sezvauri kuona muvhidhiyo inotevera, kutonga pamwe neSiri Remote hakuna kunaka kwazvo. Bhatani reKutamba / Kumbomira ndeye bhatani rekusvetuka uye yekubata padhi kubaya ibhatani rekupfura. Chinhu chakanakisa kuve nekuve neiyo MFi iri kure, chimwe chinhu chandinofunga kuti ndinopedzisira ndatenga.
Iyo system inoshanda pane iyo iPhone
Iyi sisitimu inoshandawo pane iyo iPhone. Zvese zvinhu zvakafanana, nemusiyano chete watichafanirwa kusarudza iyo iPhone faira kana tichiita nhanho muXcode. Kuisa maROM mune iyo iPhone isu tinofanirwa chete kuzviita neTunes, sezvatinoita nechero imwe application inogamuchira mafaera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekutamba echinyakare consoles paApple TV 4 (uye iPhone)
Tafadzwa chinyama (@tichanyasha) akadaro
oleeeeee, dzidziso huru, chidimbu chemupiro uye nhau dzakanaka kwazvo hongu changamire, neizvi ini ndatova neApple TV 4 inobatsira nekuve ne6 consoles mu1 (pamwe neApple uye yemuno tvOS Mitambo zveshuwa) ... Pangosvika iyo USB tambo inosvika- ini ndinotevera nhanho, iwe unokunda !!!
Pindura kuna Alex (Toretto) (@ toretto85bcn)
Zvingave zvakakwana kana zvisiri nekuti iyo yekuvandudza account haina mahara
Ini ndakangozviedza mune imwe account yandinayo uye haina kupa chero kukundikana. Iwe unongofanirwa kupinda uko kunoti "nhengo yepakati" uye bvuma zvinyorwa. Mubhadharo uyu kurodha kunyorera kuApp Store.
Eduo (@eduo) akadaro
Iyo account ndeye mahara zvachose. Izvo zvinodhura kushambadza muApp Store.
Pindura kuna eduo (@eduo)
Mhoroi, ndinokutendai zvikuru kutanga kwezvose nemipiro yenyu. Ndine mubvunzo, zvinoitika zvakafanana nekuisa Kodi? Ndokunge, kusaina rezenisi remahara rekuvandudza rinopera vhiki kana mune yakanakisa mwedzi mitatu?
kutenda uye kwaziso,
Pindura kuna davidrj
Mhoro davidrj. Nehurombo, ivo vakachinja nguva yekutendeseka uye izvozvi zvese zvinongokosha vhiki imwe chete.
Curve, isina mvura uye inovhundutsa nemishonga iPhone 6 kesi
Iko jailbreak kweiyo iOS mumaawa mashoma?